डा. केसीले जुस पिउने दिन चुडामणिलाई सगुन !
Sat, May 26, 2018 | 17:51:07 NST
11:03 AM (9months ago )
काठमाडौं, साउन २८ – शुक्रबार दिनभरिका गतिविधि आँकलन गर्दा धेरैलाई लागेको थियो–डा. गोविन्द केसी अनसनबाट उठ्छन्, चुडामणि शर्मा चाहिँ जेलमै सुत्छन् । डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न भन्दै सरकार र दलहरु बिहानैदेखि छलफलमा थिए । चुडामणिलाई थुनामै राख्ने कि थुनामुक्त गर्ने भन्नेमा सर्वोच्चमा बहस हुँदैथियो । आम नेपालीको मत डाक्टर केसीको पक्षमा र चुडामणिको विपक्षमा थियो ।
तर आफ्नो भन्दा सारा नेपालीको स्वार्थमा लडेका डा. केसीले हारे, आफ्नो स्वार्थमा मात्र पल्केका शर्माले जिते । अनसनबाट उठ्नुपर्ने डा. केसी फेरि सुते, जेलमै बस्नुपर्ने चुडामणि चाहिँ छुटे ।
मन र धन, कौडी र करोड, खुवाउनु र खानु, बाँड्नु र भाँड्नु, दिनु र लिनुमा जस्तै डा. गोविन्द केसी र चुडामणि शर्मामा आकाश पातालको फरक छ ।
गोविन्दको अर्थ नै परब्रह्म, परमात्मा, श्रीकृष्ण, गोठको मालिक । सुखभोगीहरुलाई सुन्नै मन नलाग्ने अत्यासलाग्दा, तर दुःखीरोगीहरुलाई निकै प्रिय लाग्ने आशावादी नाम । उनलाई आफ्नो ज्यान अस्वस्थ भएको मतलब छैन, तीन करोड नेपाली स्वस्थ भएको हेर्न मन छ ।
औषधी बोकेर चप्पल पड्काउँदै कहिले कर्णाली पुग्छन्, कहिले तराई । औषधी उपचार देख्नै नपाएका दुर्गम र विपन्न वस्तीका बासिन्दाको निधार र पाखुरी सुम्सुम्याउन उनलाई आनन्द लाग्छ । कहिँ कतै महामारी फैलियो भन्ने सुनेपछि उनलाई काठमाडौंमा चुप लागेर बस्न मन लाग्दैन । भित्रैदेखि छटपटी हुन्छ । बाढी पहिरो, हिलो चिप्लो, अवरोध अप्ठेरो केहीको पर्वाह नगरी कुदिहाल्छन् ।
चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्यो भनेर उनले अभियान थालेको वर्षौं बितिसक्यो । आफू र आफ्ना परिवार तथा नातागोताको लागि नभएर सारा नेपालीको स्वास्थ्यको लागि ज्यान फालेर लागेका छन् । अब त डाक्टरको सास मात्रै बाँकी छ भन्ने लागेपछि सरकार र दलहरु एकछिन तातेजस्तो गर्छन् । माग पूरा गर्ने आश्वासनमा जुस खुवाउँछन् । डाक्टरले जुस पिएर काम गर्न थालेपछि फेरि बिर्सन्छन् । सरकारलाई झस्काउन डाक्टर केसी फेरि खानु न पिउनुसँग लम्पसार पर्नुपर्छ ।
आफू लम्पसार परेर सारा नेपालीलाई जगाउन खोज्ने डाक्टर केसी । अनि अरुलाई लम्पसार पारेर आपूm मात्रै जाग्न खोज्ने चुडामणि । नामै चुडामणि । चुडामा पनि मणि मिसिएको । मणि भन्दा मनि पनि सुनिन्छ । त्यसै त मणि, त्यसमा पनि मनि । नामैमा मणि र मनि झुण्डिएपछि रुपैयाँ पैसाको के कुरा । कुबेरको खजनामा समेत कल्पना गर्न नसकिने रुपैयाँ कुम्ल्याउन सक्ने खुबी नामैले पाएका । त्यसैले लाख करोडका हैन, अर्बौंमा उनको आँखा छ ।
अर्बौंको धनमालमा आँखा भएका मान्छेलाई अरुले आँखा लगाएर कहाँ सक्छ ? सबैभन्दा तलकाले त सकेनन् नै, सबैभन्दा उच्च सर्वोच्चले समेत सकेन । नाममा र काममा समेत मणि र मनिको शक्ति भएका चुडामणि चन्दनको टीका लगाएर सगुन खाँदै जेलबाट निस्के । डाक्टर केसीले जुस पिएको हेर्न आतुरहरुले चाहिँ हरेश मात्रै खाए ।
चुडामणिलाई जेलबाट निकाल्नु पहिले डा. केसीलाई अनसनबाट उठाउनुपर्थ्यो । चुडामणिले निधारमा चन्दन टाँस्नुअघि डा. केसीको अनुहारमा आशा र विश्वासको चमक देखिनुपर्थ्यो । चुडामणिले आफन्तको हातबाट सगुन खानु पहिले नै डा. केसीले बिरामीको हातबाट जुस पिउनुपर्थ्यो । अझ यो पनि होइन, चुडामणि जेलमै बस्नुपर्थ्यो, बसाउनुपर्थ्यो । अनि डा. केसी चाहिँ फेरि सुत्नै नपर्नेगरि अनसनबाट उठ्नुपर्थ्यो, उठाउनुपर्थ्यो । तर उल्टो भैदियो । डाक्टर केसीले जुस पिउनुपर्ने दिन चुडामणिले सगुन खाए ।